စက္ရုံၾကမ္းခင္းမ်ားအား ထိခိုက္မွုဒဏ္မွကာကြယ္ရန္အသံုးျပဳေသာ ၾကမ္းခင္းသုတ္ေဆးျဖစ္ျပီး ထူးျခားေသာအားသာခ်က္ (၄)ခုျဖစ္သည့္ စုတ္ျပဲမွုဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း၊ ေပါက္ျပဲမွုဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း၊ ပိုးမႊားဒဏ္ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ဓာတုေဆးရည္ဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း စသည့္ဂုဏ္သတၱိမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ ၾကမ္းခင္းသုတ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။. အထူးသျဖင့္စက္ရံုမ်ား ၊ ျပခန္းမ်ား ၊ ဂိုေထာင္မ်ား၏ ႀကမ္းခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႀကပါသည္။
ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်ကိုကာကွယ်ရန် APT မှဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောမျက်နှာပြင်သည်ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်၊ ကောင်းမွန်စွာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပွန်းပဲ့ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးဘက်တီးရီးယားများ ပေါက်ဖွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။ . သုတ်ဆေးကိုအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်သူများအတွက်သုံးသည်။ 10^4 မှ 10^6 တွင်ကောင်းမွန်သော anti-static စွမ်းရည်နှင့် 10^6 မှ 10^9 အထိခံနိုင်ရည်အားကောင်းသည်။
APT မှဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းသည်ဓာတုအဆိပ်များ ၀ င်ရောက်တိုက်စားခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၊ ခံနိုင်ရည်နှင့်ပွန်းစားနိုင်မှု၊ ချောမွေ့သောအဆုံးသတ်မျက်နှာပြင်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ . သုတ်ဆေးများကိုကြမ်းပြင်များ၊ဓာတုသိုလှောင်ကန်များနှင့်ပြည်တွင်းရေလှောင်ကန်များကဲ့သို့ဒေသများတွင်ဓာတုထုတ်လုပ်သူများကအသုံးပြုသည်။ . ဤထုတ်ကုန်တွင်ဓာတုပစ္စည်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောဓာတုဓာတ်ကျရောက်မှုများနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်မားသောဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်ပါသည်။
Epoxy ႀကမ္းခင္းေဆးမသုတ္မွီကြန္ကရစ္မ်က္နွာျပင္ကိုျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။. ႀကမ္းခင္းေပၚရွိအရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအက္ေႀကာင္းမ်ားနွင့္ခ်ိဳင့္အေပါက္မ်ားအားအေပါက္ဖာသည္ေကာ္နွင့္ Epoxy ပတ္တီးအားအသံုးျပဳ၍ႀကမ္းခင္းမ်က္နွာျပင္ညီညာမွုရွိေစရန္ျပဳျပင္နိုင္ပါသည္။
ရေချိုးခန်း၊ ရေသိုလှောင်ကန်၊ ရေကူးကန်၊ ခေါင်မိုး၊ မြေအောက်ခန်း၊ လသာဆောင်ကဲ့သို့စိုစွတ်သောနေရာများအတွက်ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်အတွက်ကာကွယ်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ . သုတ်ဆေးတွင်ရေဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်၊ ထိခိုက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ရေစိုခံခြင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ခံနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ . ဤထုတ်ကုန်သည်တာရှည်ခံနိုင်သောရေစိုခံအမြှေးပါးကိုဖန်တီးရန်မြင့်မားသော adhesion ရှိသည်။ . အိမ်တွင်းရေလှောင်ကန်များတွင်သုံးသောအခါသုတ်ဆေးသည်အဆိပ်အတောက်ကင်းသော UV ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။